Qorista Warshadda Calaamadaha Qalinka | Shiinaha Qorista Qeexida Calaamadeeyayaasha Calaamadaha, Alaab-qeybiyeyaasha
50ML Qoraalka Fudud Isha Qalinka qalinka Dhalada Muraayadda Ardayda Dugsiga Sahaydiisa
Khad tayo sare leh, ka takhalus deebaajiga khad, iska ilaali ifafaalaha biyo-joojinta markaad wax qoraysid
Aan isbeddel lahayn, ku hayso qoyaanka, fududeynta qoraalka.
Biyo u adkaysta, midab waara oo dheer, ma laha ur gaar ah.
30ml Dhalada Dhalada ah ee Qoraalka Fudud ee Qalinka qalinka Qalinka Iskuulka Ardayga Xafiisyada Qalabka 24 Midab
100% summad cusub oo tayo sare leh
Calaamadaha Qarxa ee Ereyga Qalalan Ka Bixin Karaya Iskuulka, Xafiiska, Warshadda Qalinka
Ink oo leh midab dhalaalaya, si sahlan loo qalajiyo. Midabku ma sahlana in la libdho.
Ku dar khadkan qalinka sumadeeyaha sabuuradda, qalinka calaamadeeyaha dib ayaa loo isticmaali karaa. Taas oo ah mid dhaqaale.
Afka dhalada khadku waa mid gaar ah, wuu iska ilaalin karaa daadashada markii lagu daro khad. taas oo ku habboon oo si fudud loo isticmaali karo.
Ku habboon qalimaan sabuureed oo kala duwan.
Waa xulasho wanaagsan asxaabtaada iyo naftaada.
Dib u buuxi khad kaliya, qalabka kale ee demo ee sawirka kuma jiro.
Qorista Calaamadaha Joogtada ah ee qalinka Birta, Balaastikada, dhoobada, Qoryaha, Dhagaxa, Kartoonada iwm
Waxaa loo isticmaali karaa warqad caadi ah, laakiin khadku wuxuu u eg yahay inuu dhiig ka baxo oo uu ka muuqdo dhinaca kale.
1000ml Dhalooyinka Isha Qalinka Qalinka Kuwaasoo Dib Ugulaabanaya Cabirka Dhalooyinka Kala Duwan
OBOOC waxay wadataa noocyo kala duwan oo ah qalinka qalinka isha ugu fiican suuqa maanta dhammaantoodna 70% ka baxsan tafaariiqda.
60ml Qoraal siman oo dhalo ah Qalin qalin Qeexan Isha Xafiiska Xafiisyada Ardeyga Dib u Buuxi Qalabka Sahayda Qalinka
Dhalooyinka dhalada ah ee qalinka qalinka il waa cabir ku habboon in la tijaabiyo ama la isku dayo. Khadkan yar ee cabirka yar wuxuu ku yimaadaa dhalo dhalo ah oo waliba dib loo isticmaali karo markay faaruq noqdaan.
25L Foosto Foosto Qalin Dhadhan / Dheemka qalinka Qalinka Dhaladaha Yaryar ee Dib loogu buuxiyo
Waad ku mahadsan tahay taageerada aad siisay khadkii OBOOC.
Waxaan soo bandhignay noocyo kala duwan oo midabyo khad ah nooca dhalada ah iyo nooca kaydadka.
Dhawaan waxaan soo saarnay maaddooyinka midabka leh iyo "Isku-darka Mashiinka Bilaashka ah", kaas oo awood kuu siinaya inaad keligaa sameysid midabada midabka aad jeceshahay